के यो मेरो उद्योगमा शीर्ष रैंकिंग साइटहरूको प्रतिलिपि गर्नु बुद्धिमानी हो? Semalt जवाफ थाहा छ
२ साहित्य चोरी भनेको के हो?
3 साहित्यिक चोरी
तपाईंको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता
।। कसरी तपाइँको वेबसाइट मा मूल सामग्री छ
पछिल्ला केही दशकहरूमा, विशेष गरी इन्टरनेटको उदय र यसको व्यापक प्रयोग पछि, वेबमा चोरीको विस्फोट भएको छ। सामग्रीको लागि बढ्दो बढ्दो माग र साहित्यिक सामग्री र वास्तविक सामग्रीबीच तुरुन्त भिन्नता गर्न असमर्थता, यसले साहित्य चोरी सामग्रीको ठूलो मात्रामा इन्टरनेटमा फ्याँक्न सम्भव बनाएको छ। जहाँसम्म, यसको मतलब यो होइन कि चोरी सामग्री वेब सामग्री मा नकारात्मक प्रभाव छैन; वास्तवमा यसको गम्भीर परिणामहरू हुन्छन्।
तपाईं उच्च-स्तर, प्रासंगिक, र ट्राफिक-उत्पादन सामग्री शीर्ष-रैंकिंग साइटहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले तिनीहरूलाई प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने उनीहरूले सायद तपाईंको साइटलाई याद गर्दैनन् वा सचेत हुनेछ कि तपाईंले प्रतिलिपि गर्नुभयो तर त्यसो गर्नुहुन्न। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने तपाइँको वेबसाइटले नराम्रो असर पर्ने छ। यहाँ चोरी हो र अर्को साइटको प्रतिलिपि कसरी गर्ने, यहाँ छ कि शीर्ष उद्योग र तपाईंको उद्योगमा साइट तपाईंको साइटको लागि हानिकारक हुन सक्छ।
२. साहित्य चोरी भनेको के हो?
आजका दिनहरु इन्टरनेटमा चोरीको बारेमा धेरै चर्चा भएको छ र यसको अर्थ के हो। साहित्य चोरी अरूको लिखित मस्तिष्कको काम कसैको आफ्नै रूपमा पारित गर्ने कार्य हो। यो गलत कार्य हो किनभने यसले बौद्धिक सम्पत्ति चोर्दैछ। दुःखको कुरा, यो अभ्यास अब एकदम सामान्य छ, विशेष गरी इन्टरनेटमा। जब व्यक्तिहरू लेखहरू चोरी गर्दछन् इन्टरनेटमा, यो प्राय: किनभने तिनीहरू आफैंको गुणस्तरीय कार्य सिर्जना गर्न धेरै अल्छी हुन्छन्।
या त तिनीहरूसँग आफ्नै अनौंठो सामग्री सिर्जना गर्ने क्षमता छैन वा अद्वितीय टुक्रा सिर्जना गरेको जस्तो लाग्दैन। जबकि चोरी चोरी एक साधारण चीज जस्तो लाग्न सक्छ, यो एक धेरै गम्भीर मुद्दा हो। अर्को साइट वा स्रोतको सामग्री प्रतिलिपि गर्दा, जानाजानी वा अनजानमा, तपाईंको प्रतिष्ठा, तपाईंको विश्वसनीयता साथै तपाईंको साइटको प्रदर्शनलाई असर गर्न सक्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं चोरी चोरीबाट अलग रहनु महत्त्वपूर्ण छ।
धन्यबाद, अब विभिन्न उपकरणहरू छन् तपाईं आफ्नो सामग्री निर्माण को भित्र पूर्ण वा आंशिक चोरी चोरी गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। व्याकरण, कोपिसकेप, र लाई मनपर्दछ Semalt तपाईंको सामग्री भित्र नक्कल वा चोरीको फारामहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई खाली गर्नका लागि उपलब्ध छन्।
Pla. साहित्यिक चोरी
धेरै व्यक्तिहरूले शीर्ष-वर्गीकरण साइटहरूबाट प्रतिलिपि गर्ने खतराहरू महसुस गर्न सकेका छैनन्। तपाईंको साइटको लागि व्यक्तिहरूको सामग्री प्रतिलिपि र चोरी गर्दा तपाईं र तपाईंको ब्रान्ड गम्भीर समस्यामा पर्न सक्छ। यहाँ अन्य साइटहरूबाट प्रतिलिपि बनाउने केहि प्रभावहरू छन्।
मालिकले पत्ता लगाएको खण्डमा तपाईं आफ्नो साइटको लागि अन्य साइटहरूको सामग्री प्रतिलिपि गर्दा तपाईं आपराधिक दण्डको अधीनमा हुन सक्नुहुन्छ। ब्लगहरूसँग व्यवहार गर्दा, यो ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यदि तपाईंको सामग्री चोरी भयो भने, तपाईं मुद्दा लगाउन सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि सामग्री एक विशेष थियो। यदि तपाईले सामग्री प्रतिलिपि गरीरहेको व्यक्ति एक कम्पनी हो भने तपाईले चोरी गर्नु भएको जानकारीका लागि तपाईले कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।
यदि तपाईंले अरू कसैको सामग्री प्रतिलिपि गर्न छनौट गर्नुभयो भने, त्यसपछि तपाईंलाई मुद्दा हाल्न वा जबरजस्ती क्षतिपूर्ति दिन वा लागत खर्च गर्न लगाउन सकिन्छ जुन तपाईंको आर्थिक अवस्थामा गम्भीर दन्ते लगाउन सक्छ। विन्दुमा रहेको केस भनेको वेबसाइटको मामला हो जसलाई माइस्पेस भनिन्छ। यो भर्खरै रिपोर्ट गरिएको थियो कि एक न्यायाधीशले यो आदेश दिए कि साइटले यसको पृष्ठहरूमा प्रतिलिपि अधिकारयुक्त सामग्रीलाई लाइसेन्स प्रयोग नगरीकन प्रतिलिपि अधिकार कानूनहरू उल्ल .्घन गरेको छ। वेबसाइट क्षतिको लागि भुक्तानी गर्न बाध्य भएको थियो, जसले फर्मको वित्तीय रेकर्ड बर्बाद गरेको थियो।
तपाइँको सामग्री प्रतिलिपि गरेको केस केहि समयको लागि पत्ता लगाउन सक्दछ, तर के हुन्छ यदि तपाइँ पछि फेला पर्नुभयो भने? के तपाईं जोखिमहरू सहन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईं सक्नुहुन्न भने, त्यसो गर्नु राम्रो हो तपाईंले मेहनतीपूर्वक आफ्नै सामग्री बनाउनु भयो वा अरू कसैलाई काममा लगाउनको लागि। साथै, सबै स्रोतहरू क्रेडिट गर्ने प्रयास गर्नुहोस् जुन तपाईंले परिदृश्य जोगिन जानकारी प्रयोग गर्नुभयो जहाँ यो मानिन्छ कि तपाइँले जानकारीको एक टुक्रा प्रस्तुत गर्नुभयो जुन तपाइँको होईन।
यो तपाईंको आफ्नै साइटमा प्रयोगको लागि अर्को साइट प्रतिलिपि गरेको प्रमुख परिणाम हो। टप्नोच खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) र खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठ (SERP) मात्र तब हुन सक्दछ यदि तपाईंको वेबसाइटमा आकर्षक, गुणस्तर, र मूल सामग्री छ। यो केस हुन सक्दैन यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइटको लागि चोरी सामग्री प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। गुगलले राम्रोसँग चोरी चोरी गर्दैन, त्यसैले यदि तपाइँको वेबसाइट मा प्रकाशित सामग्री चोरी गरीएको छ, जानाजानी होस् वा छैन, तपाइँको वेबसाइट को चोट लाग्न सक्छ।
खोज ईन्जिनसँग एल्गोरिदम छ जसले तिनीहरूलाई मौलिक सामग्री र प्रतिलिपिहरूलाई अलग राख्न मद्दत गर्दछ र उनीहरूले नक्कल गरिएको सामग्री खोजी परिणाममा टाढा तल राख्छन्। यस तरिकाले, इन्टरनेटमा जानकारी खोजी गर्ने व्यक्तिहरूले मौलिक र जानकारीपूर्ण सामग्री पहुँच गर्न सक्दछन्, चोरी मान्ने पुनरावृत्ति होईन जुन कुनै मान राख्दैन। यसको मतलब यो हो कि एकचोटि गुगलले तपाईंको वेबसाईट डेरेन्क्स गरेपछि यसले स्वतः तपाईंको वेबसाइटको अनलाइन दृश्यता र प्रयोगकर्ता ट्राफिकलाई कम गर्दछ। यसले पक्कै तपाईंको व्यवसाय राम्रो गर्न सक्दैन किनकि व्यक्तिले केवल वेबसाइटहरूको संरक्षण गर्न सक्दछ; तिनीहरू देख्न सक्दैनन् जसलाई देख्न सक्दैनन्।
त्यहाँ केहि केसहरू छन् जहाँ शीर्ष-वर्गीकरण वेबसाइटहरूले साना प्रतिष्ठानको साथ साना साइटहरूबाट सामग्री प्रतिलिपि गर्दछ। यी साइटहरूले सोच्न सक्छन् कि ती विशाल भएकाले तिनीहरूको प्रतिलिपि गरिएको सामग्री साना साइटहरूबाट मूल सामग्री भन्दा बढी विश्वसनीय देखिन्छ। अझै, गुगल एल्गोरिदमसँग चोरी गर्ने साइट पत्ता लगाउने तरीका छ। र निस्सन्देह, त्यस्ता साइटहरूले पनि गुगलबाट पछाडि पीडा भोग्दछन्।
तपाइँको वेबसाइट को लागी चोरी चोरी वेब को प्रभाव यो हो कि तपाइँ तपाइँको विश्वसनीयता र समग्र रूप मा प्रतिष्ठा गुमाउनु पर्छ। यदि तपाइँको ग्राहकहरु र ग्राहकहरु लाई तपाइँको सामग्री चोरी भएको थाहा पाएमा, तपाइँ तपाइँको विश्वसनीयता र तिनीहरुसंग प्रासंगिकता गुमाउन सक्नुहुन्छ। धेरै मानिसहरु जो इन्टर्नेट मा राम्रो प्रतिष्ठा छैन को लागी अरु को काम चोरेर को लागी एक नाम कमाउन को लागी सक्षम छन्, तर यसले तपाइँको वेबसाइट को लागी लामो समय तक चोट पुर्‍याउन सक्छ।
यसका साथै धेरै व्यक्ति समस्यामा परेका छन् किनकि उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा पोष्ट गरेका छन्। नक्कली वा गलत जानकारी फेला पारेको सामग्री पोस्टिंगको कल्पना गर्नुहोस्; तपाइँको दर्शकहरु तपाइँ मा भरोसा गुमाउन हुनेछ। यसले ग्राहक वा व्यवसायको घाटा निम्त्याउन सक्छ, जुन तपाईलाई चाहानु भएको कुरा होईन। सम्भावित ग्राहकहरु लाई तपाईको उत्पादन वा सेवालाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन सक्छ जब तिनीहरूले पत्ता लगाए कि तपाईं अरू कसैको काम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ मूल सर्जकलाई उचित क्रेडिट बिना नै।
अरू व्यक्तिको कामहरू चोरी गर्नु भन्दा तपाईले चिन्नु भएको विषयहरुका बारे लेख लेख्नुपर्दछ। त्यसो गरेर, यो सम्भव छ कि तपाईको प्रतिष्ठा सुधार्न थाल्छ, र तपाईले यस्तो प्रतिष्ठा निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ जुन ईमान्दारको साथ मान्छेलाई साँचो संग संगत गर्न को लागी।
How. कसरी तपाइँको वेबसाइट मा मूल सामग्री छ
पूर्ण अनुसन्धान गर्नुहोस्
तपाईको साइटको लागि कुनै पनि शीर्षकमा लेख्न सुरू गर्नु भन्दा पहिले तपाईले यो विषय राम्ररी पढ्नुपर्दछ र अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसले तपाईलाई परिचित शीर्षकहरूको बारेमा लेख्न मद्दत गर्दछ, तर यदि तपाइँ अपरिचित शीर्षकको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले लेख्नु अघि वा टाइप गर्नु अघि अझ अध्ययन गर्नु पर्छ ताकि मानिसहरूलाई गलत सूचना नदिनुहोस्। तपाईले त्यो विशेष क्षेत्रमा अरू कसैलाई पनि यो पोस्ट गर्न अघि सामग्री प्रुफ्रेड गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँको विचार र जानकारी तपाइँको सामग्री को शीर्षक मा उपयुक्त रूपरेखा
व्यक्तिहरू बारम्बार सामग्री निर्माणमा उफ्रने गल्ती गर्दछन् तिनीहरूको सामग्रीमा के समावेश छ भनेर बाह्य रूपरेखा बिना। यो उप-सामग्री सामग्री सिर्जना गर्ने निश्चित तरीका हो। तपाईं बाटोमा थकित हुन सक्नुहुनेछ वा प्रेरणा गुमाउन सक्नुहुन्छ र केही अन्य वेबसाईटबाट सामग्री प्रतिलिपि गर्ने निर्णय गर्नुहोस्। तर जब तपाइँ तपाइँको सामग्री लाई पहिलो पटक रूपरेखा गर्नुहुन्छ, प्रेरणाको निरन्तर बगिरहने उच्च सम्भावना हुन्छ जब सम्म तपाइँ शीर्षकमा लेख्न सक्नुहुन्न।
तपाईंको तथ्य र जानकारी प्रमाणित गर्नुहोस्
एउटा विन्दुमा भनेझैं तपाईंले कुनै पनि विषयमा लेख्नु अघि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तपाईंको सामग्री सिर्जना गर्नु अघि र पछाडि, तपाईंले अझै पनि आफ्नो तथ्यहरूको प्रमाणित गर्नुपर्दछ कि तपाईंको सामग्रीमा प्रदान गरिएको जानकारीको बारेमा केही गलत छैन।
तपाईंको जानकारी, तथ्यहरू र तथ्या Sources्क स्रोतहरू सन्दर्भ गर्नुहोस्
तपाईलाई प्रमाणित स्रोतहरू प्रयोग गर्नका लागि पर्याप्त छैन तपाईंको सामग्री सिर्जना गर्न सूचनाहरू बटुल्न; तपाईंले ती स्रोतहरूमा creditण दिनु पर्दछ जहाँ उनीहरू तपाईंको सामग्री भित्र लेखिएको हुन्छ वा लेखको अन्तमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।
आफ्नो रचनात्मकता मा फेंक
जुनसुकै विषयमा तपाई लेख्दै हुनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो रचनात्मकतामा हाल्नु पर्छ तपाईको लेखन अपको स्वामित्व राख्न। सामग्री तपाईंको लेखन शैली र आवाज सहन पर्छ। यो तपाइँ तपाइँको वेब आगन्तुकहरु को लागी प्रिय हुनेछ।
तपाइँ सँधै तपाइँको पोष्ट संग जानकारी को लागी प्रासंगिक जानकारी, तथ्यहरु, र तपाइँको सामग्री मा आंकडा समावेश गरी। यस तरिकाले, प्रतिलिपि गरिएको सामग्री बाहेक तपाईंको वास्तविक कार्य बताउन सजिलो हुनेछ।
तपाईंको सामग्री निर्माण आउटसोर्सिंग
यदि तपाईंलाई अपरिचित शीर्षकहरूको बारेमा पोष्ट गर्न आवश्यक छ वा तपाईंसँग तपाईंको सामग्री सिर्जना गर्न समय छैन भने तपाईंले कार्य आउटसोर्सिंगको बारेमा विचार गर्नुपर्छ। तपाईंको सामग्री लेख्न विशाल ज्ञान र विश्वसनीयताको साथ केवल राम्रो लेखकहरू भाँडा दिन प्रयास गर्नुहोस्। यो पनि महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ तिनीहरूलाई उद्योगको मापदण्ड अनुसार राम्रो भुक्तान गर्नुहोस्; तपाईले तिर्नु पर्ने कुरा पाउनुहुन्छ। तपाईं परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ Semalt विविध सामग्रीमा उच्च-गुणवत्ता सामग्रीको लागि; तिनीहरू उद्योग मा सबै भन्दा राम्रो हो।
चोरी चोरी जाँच गर्नुहोस्
तपाईंको सामग्री चोरीको जाँचकर्ताहरूको माध्यमबाट चलाउन प्रयास गर्नुहोस् उनीहरूको मौलिकता निश्चित गर्न र सबै नक्कल वाक्यांशहरू र वाक्यहरू ठीक जस्तो देखिनका लागि। व्याकरण र कोपिसकेप सब भन्दा सामान्य र प्रभावी चोरी चोरी हो। तपाइँ आफ्नो वेबसाइटको सामग्री विशिष्टता जाँच गर्न Semalt को सामग्री विशिष्टता उपकरणहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको वेबसाइटमा चोरी वा प्रतिलिपि गरिएको सामग्रीको प्रयोगको प्रभाव धेरै गम्भीर छ कि यसलाई कहिले पनि बेवास्ता गरिनेछैन। गुगलले तपाईंलाई यसको लागि दण्ड दिन सक्दछ; तपाईं यसको लागि मुद्दा चलाउन सक्नुहुन्छ। उल्लेख गर्नु हुँदैन, तपाईंले आफ्नो अवस्थित र सम्भावित दर्शकहरूको साथ आफ्नो प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता गुमाउनुहुनेछ। यद्यपि, अनौंठो सामग्री सिर्जना गर्नाले तपाईंको ब्रान्ड र साइटलाई मद्दत गर्दछ। यसले विश्वास र विश्वसनीयता सिर्जना गर्दछ, ब्रान्ड र साइट दृश्यता बढावा दिन्छ, र तपाईं गुगलको साथ सहि पृष्ठमा पनि हुनुहुनेछ।